Mkparịta ụka vidiyo otu: kedu ọrụ ị ga-ahọrọ?
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịkparịta ụka, mana gịnị ma ọ bụrụ na ị nọ n'ebe dị anya na onye na-ahụ maka onye chọrọ?Nsonaazụ ule sitere na ọrụ nkata vidiyo ọtụtụ mmadụ ise ga-enyere gị aka ịmepụta klọb mebere nke gị ka gị na ndị enyi kparịta ụka na webụ.A na-emetụta ogo na ịdị mma nke ọrụ nkata vidiyo site n'ọtụtụ ihe, site na bandwit dị ruo na ogo kamera weebụ ndị sonyere.A na-eji kọmpụta abụọ, laptọọpụ Windows abụọ na otu MacBook mee nnwale.Ejikọrọ kọmputa na netwọk site na Ethernet, ejikọrọ laptọọpụ site na ikuku.Nnwale ahụ weere n'uche ka ọ dị mfe ịwụnye na iji otu ọrụ yana ma ha nwere ọrụ ndị ọzọ.
NwụnyeGoogle HangoutsIji jiri Google Hangouts, ị ga-achọ akaụntụ Google+.Ị ga-achọkwa ịwụnye nkwụnye ihe nchọgharị dakọtara na Windows XP na n'elu, Mac OS X 10.5 na n'elu, ma ọ bụ Linux.A na-esi na ibe Google+ abanye nkata vidiyo a.N'aka nri ị ga-ahụ bọtịnụ Malite Video Call.Ịpị ya ga-ebu ụzọ gaa na ibe nlele ebe Google ga-arụ ọrụ kamera weebụ na igwe okwu gị.N'oge a, ọ nweghị ndị enyi gị nwere ike ịhụ gị.
N'oge nzukọ vidiyo, ị nwere ike ilele vidiyo YouTube
Ibe ule nwere ngọngọ nke ị nwere ike họrọ " okirikiri" (ma ọ bụ otu ndị enyi) nke a ga-agwa maka nkata vidiyo. Mgbe nkata vidiyo malitere, onye ọrụ ọ bụla etinyere na "okirikiri" ahọpụtara ga-enwe ike ịhụ ya ma, ọ bụrụ na achọrọ, sonye na mkparịta ụka ahụ.Iji malite ịkparịta ụka, pịa bọtịnụ Jikọọ wee gaa n'ọnụ ụlọ nzukọ vidiyo. Ị nwere ike ịkpọ ndị ọrụ ndị ọzọ ka ha sonye na mkparịta ụka ahụ site na ịpị adreesị Gmail ha na mmanya dị n'aka ekpe. Ihe ruru mmadụ iri nwere ike iso na ọgbakọ vidiyo a.
Ihe ngosi vidiyo na ịdị mmaN'oge mkparịta ụka ahụ, a ga-egosipụta ọkà okwu na nnukwu windo, na ndị ọzọ niile sonyere - na obere windo dị n'okpuru. Ụdị ngosi a na-ewere nkwurịta okwu mepere anya. Ọ bụrụ na mmadụ abụọ na-ekwu okwu n'otu oge n'ihe dị ka otu olu, Google Hangouts ga-ahọrọ naanị otu n'ime ha, nke a ga-egosipụta na etiti. Agbanyeghị, ọ bụrụ na nhọrọ Google adabaghị gị, ị nwere ike họrọ onwe gị nke ga-egosipụta n'etiti ndị sonyere na etiti windo ahụ.Dị ka nnwale ahụ gosipụtara, mgbe ogbako vidiyo na-achịkọta ihe karịrị ndị sonyere ise, vidiyo ahụ nwere ike belata, mgbe ụfọdụ foto ahụ na-aghọ nke ọma n'eziokwu. A na-agbagọkwa olu mgbe ụfọdụ, mana n'ozuzu ogo ma vidiyo na ụda dị elu nke ukwuu.
Atụmatụndị ọzọ na mgbakwunye na nkwanye vidiyo, Google Hangouts na-enye ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ. Nnukwu bọtịnụ dị n'okpuru windo vidiyo na-enye gị ohere izipu ozi ederede otu. Ma na mpio nkata vidiyo bụ́ isi, egosighị ozi onye so na ya zitere ozi ederede. Ndị ọrụ ndị ọzọ, na uche ha, pịa bọtịnụ "Chat" ka ịgụta akwụkwọ ozi.Otu ihe dị mkpa bụ ikike iji bọtịnụ dị n'okpuru ngwaọrụ rụọ ọrụ YouTube. Ọ na-enye gị ohere ịchọta vidiyo nke a ga-egosipụta na ihuenyo ụlọ n'oge ogbako ahụ dum. N'oge ịkpọghachi vidiyo, Hangouts ga-emechi igwe okwu gị ozugbo ka agaghị agbasa ụda gị na vidiyo dị n'azụ. Ma ọ bụrụ na ị ka chọrọ ikwu okwu, bọtịnụ Push to Talk ga-abịa napụta, nke ga-ebelata ụda vidiyo ma gbanye igwe okwu gị.
Ana-adụ ndị nwe akwụkwọ ndetu ọdụ ka ha jiri ngwọta a naanị maka ogbako vidiyo dị mkpirikpi, n'ihi na ndị na-adịte aka na-eme ka kọmpụta kọmputa na-ekpo oke ọkụ. Google Hangouts, n'aka nke ọzọ, bụ nnukwu ngwá ọrụ maka obere mkparịta ụka vidiyo, mana iji ya, onye ọ bụla ga-enwerịrị akaụntụ Google.
Nrụnye adịchaghị nke SkypeIjimee ọgbakọ ọgbakọ vidiyo na Skype, ị ga-achọ akaụntụ Skype Premium yana ụgwọ ndenye aha nke $ 9 / ọnwa (enwere ike zụta ohere otu ụbọchị maka $ 5).Site na ịtọlite ​​​​ogbako vidiyo, onye nwe akaụntụ adịchaghị nwere ike isonyere ndị ọrụ Skype ndị ọzọ na ya, n'agbanyeghị akaụntụ ha na-eji - akwụ ụgwọ ma ọ bụ n'efu.Ọ bụrụ na onye nhazi ọgbakọ hapụrụ nkata otu, nnọkọ ahụ ga-akwụsị ndị niile sonyere.
Ma ụdị Skype efu na akwụ ụgwọ chọrọ ndebanye aha na ọrụ na ntinye nke ngwa ndị ahịa vidiyo na kọmputa. Ya mere, nke a abụghị nhọrọ kacha mma ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịhazi ogbako vidiyo ngwa ngwa. Ozugbo ịbanye na akaụntụ gị, ị nwere ike ịchọ ndị enyi site na Facebook, Gmail, Hotmail, ma ọ bụ site na aha njirimara Skype gị. Skype Premium na-enye gị ohere ijikọ na ogbako vidiyo ruru ndị sonyere 24. Iji mee ka nkata vidiyo rụọ ọrụ, ị ga-ejirịrị ụdị mmemme kachasị ọhụrụ.
Ihe ngosi vidiyo na ịdị mmaN'ozuzu, ogo vidiyo na ọdịyo na-ebufe site na Skype kwesịrị otuto kachasị elu. Ogo mgbasa ozi vidiyo a ka nke Google Hangouts gosipụtara: ọ kachasị mma ma doo anya, yana obere igbu oge. Mgbe ụfọdụ, iyi vidiyo na-ajụ oyi na nsogbu na-etolite ka ogbako vidiyo na-aga n'ihu. Ogo ụda dịtụ mma karịa Google. E gosipụtara ndị sonyere ọhụrụ n'ihuenyo dị nta, mana ịpị na ihuenyo achọrọ na-abanye na otu onye so na ya.Ogo igwefoto webụ dị mkpa karịa maka Skype Premium karịa maka Google Hangouts. Nnwale ahụ jiri kamera abụọ 720p HD jikọtara na desktọpụ yana MacBook nwere kamera weebụ iSight arụnyere n'ime ya. Ọdịiche dị na mkpebi nke Skype maka iSight na maka kamera weebụ HD dị egwu. Ijikọ otu igwefoto atọ ahụ na Google Hangouts emeghị nnukwu ọdịiche dị na ịdịmma, n'agbanyeghị na onyonyo sitere na iSight tụgharịrị doo anya.
Njirimara ndị ọzọSkype nwere ọtụtụ atụmatụ agbakwunyere bara uru arụnyere n'ime ọrụ vidiyo otu. Ndị na-eso ogbako vidiyo nwere ike izipu ozi ederede na nkata ahụ, nke a ga-egosipụta na windo pụrụ iche n'okpuru vidiyo. Mgbe otu n'ime ndị sonyere dere ozi ederede, ndị ọzọ so na ya ga-ahụ obere okirikiri uhie na akara nkata, na-egosi na ozi ọhụrụ erutela. Ọ dịkwa ike izipu ozi na ọgbakọ vidiyo otu site na SMS, mana ọrụ a chọrọ ugwo agbakwunyere.Na mgbakwunye, ịnwere ike izipu faịlụ (onyinyo, MP3) na ndị sonyere ọgbakọ ndị ọzọ site na Skype. A na-eme nke a site na windo isi, nke dị oke mma, ebe ọ bụ na ị chọghị imepe ihe nchọgharị ma ọ bụ onye ahịa email iji zipu faịlụ na otu.
A na-akwụ ụgwọ mkparịta ụka vidiyo na- arụ ọrụna Skype Premium ma chọọ ka etinyere ngwanrọ karịa ọrụ ndị ọzọ.Ogo olu abụghị nke kacha mma n'ime ọrụ ise a nwalere, yana ịdị mma vidiyo adịghị mma karịa ọrụ Google Hangouts n'efu.
TinychatwụnyeTinychat, ọrụ nkata vidiyo dabere na ihe nchọgharị.N'okwu a, ịkwesighi ịwụnye ihe ọ bụla - naanị ịchọrọ ịhazi ụlọ nkata nke gị ma ọ bụ sonyere ndị dị adị.Ọrụ Tinychat bụ n'efu yana mgbasa ozi ọkọlọtọ.
Ọ bụrụ n’ị kpebie ịtọ ụlọ nkata nke gị, Tinychat ga-eduzi gị site na windo dị iche iche iji nyere gị aka ịhọrọ kamera weebụ na igwe okwu, ọ ga-akpalikwa gị ịhọrọ n'etiti igwe okwu ma ọ bụ Push to Talk. N'okwu nke ikpeazụ, igwe okwu ga-arụ ọrụ naanị mgbe ejidere bọtịnụ a.Ọ dị mfe ịkpọ ndị ọzọ nkata vidiyo. Iji mee nke a, jiri bọtịnụ Share dị n'elu windo nkata. Tinychat ga-ewepụta URL nke enwere ike iziga onye ọ bụla. Ị nwere ike ịnweta otu Tinychat gị site na Facebook, Twitter akaụntụ ma ọ bụ na-amaghị aha dị ka ọbịa. Ndị ọbịa ọhụrụ ga-enwe ike ịhụ nkata vidiyo, mana iji tinye vidiyo nke ha na ụlọ nkata, ha ga-achọ ịpị bọtịnụ Malite Mgbasa Ozi.
Vidiyo interface na ịdị mmaNa Tinychat, ị nwere ike hazie ihe ruru mgbasa ozi iri na abụọ, mana ọnụọgụ ndị na-ekiri enweghị oke.Ogo vidiyo dị na Tinychat dị mma, mana ogo ọdịyo adịghị mma.Ụda ụda azụ na-adịghị mma karịsịa.Olu na-ada nke ukwuu na agbagọ agbagọ ma e jiri ya tụnyere Hangouts na Skype.Enwere nkwụsị na ọdịyo na vidiyo ruo ọtụtụ sekọnd, yana igbu oge na iyi vidiyo, mgbe nke ahụ gasịrị, achọrọ ịmalitegharị ihe nchọgharị.
Akụkụndị ọzọ na-adọrọ mmasị Tinychat bụ EtherPad Lite (ị nwere ike ịmalite ya site na ịpị akara ngosi nke nwere mpempe akwụkwọ n'okpuru windo vidiyo).Na ngọngọ a, onye ọ bụla so na ogbako vidiyo nwere ike idetu ihe, nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịrụkọ ọrụ ọnụ na akwụkwọ.Ọzọkwa, a ga-egosipụta ndetu nke ọ bụla n'ime ndị sonyere na agba dị iche.
ỌrụMaka mkparịta ụka ogologo oge, Tinychat dị anya na nhọrọ kacha mma.Mana ọ nwere ike ịbụ ezigbo ngwọta ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpọkọta ndị mmadụ ngwa ngwa maka ogbako vidiyo.Ọzọkwa, ọrụ a kwesịrị ekwesị maka ịrụkọ ọrụ ọnụ na ọrụ ndị na-achọ ka ederede karịa ikwu okwu.
NrụnyeAIM AVAIM ọhụrụ AV na-egosipụta nraranye AOL ka ọ nọgide na-asọmpi na ụlọ ọrụ nzụkọ vidiyo.Ụlọ ọrụ ahụ ewepụtala ụzọ dị mfe ma dị mma iji soro ndị obere ìgwè nke ihe ruru ndị ọrụ anọ na-ekwurịta okwu.
Mkparịta ụka vidiyo AV
Ịmalite mkparịta ụka dị nnọọ mfe: naanị gosi na ị gaferela afọ 13, na AV ga-enye gị ohere ịnweta nkata ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, sistemụ ahụ ga-ewepụta URL nke achọrọ ka agwa ndị na-emekọrịta ihe n'ọdịnihu. Enwere ike ịkpali ndị ọrụ Mac mbụ ka ha wụnye ụdị Adobe Flash dakọtara na Mac OS 10.6 ma ọ bụ karịa. Maka ndị ọzọ, o yikarịrị ka etinyere ya, yabụ na ọ dịghị mkpa ibudata na wụnye ngwanrọ ọzọ. Na mgbakwunye, ịgaghị mkpa ịdebanye aha na ọrụ ahụ wee nye AIM ozi nkeonwe.
Ntụgharị vidiyo na ịdịmmaN'ime nnwale anyị nwere AV, vidiyo rụrụ nke ukwuu karịa na ọrụ ndị ọzọ.Vidiyo vidiyo na-ajụkarị oyi, ọ bụ ezie na nnyefe ọdịyo mara mma.Nrụgharị ọrụ enyeghịkwa ihe ọ bụla.Ọzọkwa, mgbe ha wụnyeghachiri ebe a na-akparịta ụka n'Ịntanet, a chọtara ndị sonyere atọ, n'agbanyeghị na ọ bụ naanị mmadụ abụọ tinyere aka na nnwale ahụ.
Atụmatụ agbakwunyereHa dị obere - nkata ederede na ike ịse nseta ihuenyo nke ogbako vidiyo.
Ogo AV na- arụ ọrụadịghị mma maka ajụjụ ọnụ ndị ọkachamara ma ọ bụ ọgbakọ azụmahịa. Otú ọ dị, AV nwere ike ịbụ ngwọta dị mfe na nghọta maka ịkparịta ụka na obere ìgwè mmadụ anọ, ma ọ bụ maka ịhazi oku vidiyo ngwa ngwa na-etinyeghị ngwanrọ ọzọ. Dị ka ihe atụ, ọ na-eme ka ọ dị mfe iso ndị ikwu ma ọ bụ ndị enyi na-enwechaghị ihe ọmụma nkà na ụzụ na-akpakọrịta.
NtinyeAnyMeetingỌrụ AnyMeeting n'efu na-enye gị ohere ijikọ ihe ruru mmadụ isii n'otu oge na nkata vidiyo na-arụ ọrụ.N'otu oge ahụ, ihe ruru mmadụ 200 nwere ike isonye na vidiyo vidiyo dị ka ndị na-ekiri ihe nkiri.Iji malite ịkparịta ụka, ọ bụ naanị otu onye ọrụ ga-edebanye aha na ọrụ ahụ (na-abụkarị onye nhazi nkata).Iji kpọọ ndị sonyere, pịa bọtịnụ Start Webinar, ma mgbe ịpịchara bọtịnụ Start mic & cam nke dị na ala Toolbar, ọgbakọ vidiyo ga-amalite.
Mkparịta ụka vidiyo ọ bụla
Na mbụ, AnyMeeting ga-egosipụta windo nkwadebe.Mgbe inyechara anya gị mmecha mmecha, pịa bọtịnụ adịla m njikere ma ị ga-ahụ onwe gị n'ime ụlọ ogbako vidiyo.
Vidiyo Interface na QualityAnyMeeting bụ ọrụ ọzọ na-adịghị arụ ọrụ nke ọma na Mac ochie. Dị ka AV, ọ chọrọ ka etinyere Adobe Flash maka Mac OS 10.6 ma ọ bụ karịa. Mana egwuregwu ahụ bara uru kandụl: ịdị mma na izi ezi nke nnyefe vidiyo adịghị ala karịa nke Google Hangouts ma ọ bụ Skype nyere. Ogo nke vidiyo na mgbasa ozi olu dị ezigbo mma, na-enweghị oke "ọla" na mgbagha.
Atụmatụ ndị ọzọAnyMeeting bara ụba na atụmatụ ndị ọzọ. Ị nwere ike igosi ihuenyo maka ihe ngosi, biputere ozi ogbako, ma ọ bụ jiri atụmatụ "nzukọ site na ekwentị" ka ndị na-enweghị ugbu a kọmputa nwee ike soro mmepe nke mmemme. Onye nhazi ogbako ga-ahụ ndepụta nke ndị bịaranụ, ndị bịaranụ ga-enwe ike ịhọrọ akara ngosi site na menu ọnọdụ ọnọdụ m nke dabara na àgwà ha. Na mgbakwunye, nkata ederede, vidiyo na ọdịyo nwere ike gbanyụọ ma ọ bụ mee ka ọ dị.
ỌrụMaka ndị enyi ma ọ bụ nkwurịta okwu ezinụlọ, ọrụ a juputara na ọrụ, mana ọ dị mma maka nzukọ azụmahịa na ihe ngosi.Na ebe a uru ya kachasị mkpa bụ na ọ bụ naanị onye nhazi ogbako kwesịrị ịdebanye aha na ya.Ndị ọzọ so na-abanye n'ebe a na-akparịta ụka n'Ịntanet site n'itinye naanị adreesị ozi-e nke ezigara ha akwụkwọ ịkpọ òkù ahụ.
Nhọrọ kacha mmaYabụ kedu ọrụ kacha mma?Anyị chere na nhọrọ ya dabere na ebumnuche gị ugbu a.Google Hangouts na Skype bụ ọrụ abụọ kacha ewu ewu na njiri mara.Ha kacha mma maka obere ìgwè, ha niile nwere akaụntụ Google ma ọ bụ Skype.Hangouts bụ n'efu, mana ọ bụrụ na ogo olu dị gị mkpa, Skype kwesịrị ịmasị gị.Tinychat ma ọ bụ AV sitere na AIM nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ị nwere obere oge ma chọọ nkata ngwa ngwa na-ebughị ụzọ wụnye ngwanrọ ọ bụla. Ndị otu ga-enweta ya site na ịpị URL ezigara ha, na mgbakwunye, ọrụ abụọ a bụ n'efu. Tinychat dabara adaba maka ndị nwere mmasị na imekọ ihe ọnụ na akwụkwọ, karịa nkwurịta okwu olu. Na ọrụ AV dị mma maka iso ndị ikwu na ndị enyi na-ekwurịta okwu, ndị na-enweghị ọbụna ịdebanye aha na ya. N'ikpeazụ, AnyMeeting na-enye ikpo okwu dị mma maka nnukwu ogbako azụmahịa, ebe ihe ruru mmadụ 200 nwere ike ịlele ihe ngosi vidiyo n'otu oge. Ọzọkwa, naanị onye nhazi ogbako kwesịrị ịdebanye aha na onye na-ahụ maka ọrụ. Atụmatụ ndị ọzọ na-akwalite ohere azụmahịa,mana ọ ga-abụ nke ukwuu mgbe gị na ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ na-ekwurịta okwu.
Kedu ihe bụ nkata vidiyo maka?
Ebe mmadụ bụ onye na-elekọta mmadụ, nkwurịta okwu na-ekere òkè dị ukwuu na ndụ ya.Site n'oge ruo n'oge, ọbụna onye a na-edobe anya kwesịrị ịgwa mmadụ okwu.Na mgbakwunye, na-enweghị mkparịta ụka dị irè na nke dị elu, ọ gaghị ekwe omume idozi ọrụ ọ bụla na nsogbu azụmahịa.
Ruo ọtụtụ narị afọ, ndị mmadụ na-arụsi ọrụ ike na ndị enyi ha na ndị enyi ha na-ekwurịta okwu, ma dozie nsogbu ha niile na usoro nkwurịta okwu.Ma eziokwu nke oge a bụ nke na ọ na-esiri anyị ike ịchọta oge iji mee nhọpụta, pụta na ya ma soro onye na-emekọrịta ihe anyị nwere mmasị na-ekwurịta banyere otu isiokwu.
Ọ dabara nke ọma, mgbe ịntanetị batara na ndụ anyị kwa ụbọchị n'ụzọ siri ike na nke siri ike, ọtụtụ n'ime nkwurịta okwu anyị abanyela n'eziokwu.Anyị na ndị enyi anyị na netwọk mmekọrịta, na-ezigara ndị mmekọ na ndị ọrụ ibe anyị ozi-e.
N'oge na-adịbeghị anya, ohere ọhụrụ nke nkwurịta okwu site na Ịntanetị apụtala, nke dị maka onye ọ bụla nwere kamera weebụ ma jikọọ na Ịntanetị ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ na-enweghị oke okporo ụzọ.
Ọtụtụ saịtị na-enye oku vidiyo n'ịntanetị ugbu a na Weebụ.Naanị ihe fọdụrụ maka onye ọrụ bụ ime nhọrọ maka otu n'ime ha.Ihe kwesịrị ịrịba ama, dịka ọmụmaatụ, ọrụ nkata vidiyo ịntanetị http://pentavideo.ru.
The akụ nwere a adaba na kensinammuo interface, e wezụga, ọ bụ kpam kpam free, nke dị nnọọ ịrịba ama maka ọtụtụ ọrụ ..
Mkparịta ụka vidiyo n'ịntanetị na-enye gị ohere ịme ọ bụghị naanị mkparịta ụka na onye na-emekọrịta ihe, kamakwa ịme mkparịta ụka na ọnụ ọgụgụ mmadụ buru ibu n'otu oge na ọnọdụ ogbako.N'ihi njirimara nke ikpeazụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji mkparịta ụka vidiyo na-enwe nzukọ na ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ na nkewa ha.
Dị ka aha ahụ na-egosi, nkata vidiyo bụ ikike iduzi mkparịta ụka n'ụdị vidiyo.N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụghị naanị na ị na-anụ onye na-emekọrịta ihe, kamakwa ị na-ahụ ya site na igwefoto vidiyo.
Ọchịchọ dị elu maka mkparịta ụka vidiyo n'ịntanetị n'ozuzu, yana ọrụ http://pentavideo.ru karịsịa, bụ nke ukwuu n'ihi na nkwurịta okwu vidiyo n'ịntanetị na-enye ohere dị ukwuu maka igosipụta mmetụta uche.Ọfọn, karịsịa nkwurịta okwu na-arụsi ọrụ ike agaghị emerụ mkpịsị aka gị, dịka ọ na-emekarị ma ọ bụrụ na mkparịta ụka dị na ọnọdụ akwụkwọ ozi.
Ma nkwurịta okwu vidiyo n'ịntanetị na-enwetawanye ewu ewu ọ bụghị maka enyi, kama maka nkwurịta okwu azụmahịa.Ọzọkwa, ọ dị nnọọ adaba.Ya mere, dịka ọmụmaatụ, onye njikwa nke na-aga njem azụmahịa ma ọ bụ ezumike nwere ike ịchịkwa ọrụ na nzukọ ya n'ụzọ dị mfe.Ee, na ndị nọ n'okpuru, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nwere ohere ịjụ ya maka okwu ọ bụla dị mkpa.
Ọ bụrụ na anyị achịkọta uru niile bụ isi nke iji nkata vidiyo, mgbe ahụ, nke mbụ, ihe ndị a dị mkpa kwesịrị iburu n'uche:
- ohere nke ime mkpebi ngwa ngwa;
- mmụba dị ukwuu na nrụpụta ọrụ;
- ohere nke inweta enyemaka ọkachamara;
- echekwa ego;
Ọ bụrụ na ọ dịtụbeghị mgbe ị na-eji usoro nzikọrịta ozi ịntanetị site na igwefoto vidiyo na mbụ, anyị na-akwadosi ike ka ị gbalịa.Ị gaghị emechu ihu.
Vesti.net: Mkparịta ụka vidiyo Otu Microsoft ga-etinye ndị sonyere n'otu oghere mebere
Microsoft ekwupụtala mmelite dị ukwuu maka ọrụ ọgbakọ vidiyo otu ya.Otu n'ime ihe ọhụrụ ọhụrụ bụ iwebata ọnọdụ ọnụ ọnụ ọhụrụ - emepụtara ya site na mmalite nke ọrịa coronavirus karịsịa maka ndị na-arụ ọrụ ma na-amụ ihe.
Ụdị ahụ na-emepụta mmetụta na ndị niile sonyere nzukọ nọ n'otu ọnụ ụlọ dijitalụ.Teknụzụ nkewa dabere na AI na-akpali avatar onye so na ya na nzụlite izugbe.Ọ nwere ike dị ka ọmụmaatụ, dị ka klas, ebe mmadụ 49 nwere ike ịgbakọta ozugbo.Maka tebụl gburugburu na ụlọ akwụkwọ, a na-enyekwa ihe ndabere ndị ọzọ.
Ọnụ ọnọdụ dị ugbu a na beta na ụlọ ọrụ ahụ na-ekwe nkwa ịhapụ ya ndị ọrụ otu niile n'August.Ihe nzacha maka vidiyo ga-adịkwa na Otu.N'ime ụlọ nlele, onye ọrụ nwere ike họrọ nzacha iji mezie ọkwa ọkụ wee mee ka a na-elekwasị anya na igwefoto tupu ịbanye na nzukọ ahụ.Ị nwere ike, dịka ọmụmaatụ, họrọ ime ka ọ ghara ime ka azụ azụ gị ghara imerụ gị ahụ.
Mmelite ọzọ bụ Dynamic View.Dị ka Microsoft kwuru, ọ bịara nwee ike igosi ihe maka imekọ ihe ọnụ na ndị sonyere n'onwe ha n'otu ihuenyo ahụ.Emelitekwa ohere ịnweta ozi nkata.Ozi ndị a niile ezigara n'oge ọgbakọ Ndị otu Microsoft ga-apụta na enyo onye ọ bụla na-enweghị imepe panel nkata iche.
Na otu ọhụrụ ọhụrụ - ndepụta okwu na ntụgharị asụsụ.Ndị sonyere ga-enweta ọrụ na-atụgharị okwu site na asụsụ ndị ọzọ ozugbo.Ma, ya mere, ọgbakọ ga-ekwe ka ndị na-asụghị otu asụsụ nwee ike ịkparịta ụka n'etiti onwe ha.Mgbe afọ a gasịrị, Microsoft na-ekwe nkwa ịgbakwunye ederede ederede nke nzukọ, nke ga-enye gị ohere ịdekọ ihe ekwuru.Mgbe nzukọ ahụ gachara, a ga-echekwa faịlụ transcript zuru oke na taabụ nkata maka nzukọ ahụ.
Microsoft kwuru na n'oge na-adịghị anya Otu ga-enwe ike ịkwado ihe ruru 1,000 ndị bịara nzukọ, yana ihe ruru mmadụ 20,000 ma a bịa n'ihe ngosi ma ọ bụ mkparịta ụka.Maka ngwa mkpanaka, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwe nkwa iweta nkwado maka onye enyemaka dijitalụ Cortana.Ọ ga-enyere gị aka ịme oku na-enweghị kọntaktị na otu onye, ​​jikọọ onye ọrụ na nzukọ a haziri ahazi, kwupụta ozi ma zipụ ha, yana faịlụ ndị dị mkpa na nkata ogbako.
Ọhụrụ na Jivo: nkata vidiyo, ọnụ ọgụgụ akaụntụ na ndị na-eweta nkata ọhụrụ
Anyị akwadola ọtụtụ ihe ọhụrụ bara uru nke ga-eme ka ọrụ Jivo dị mfe ma nyere aka ịbawanye ahịa.
Soro ndị ahịa rụọ ọrụ site na nkata vidiyo
Tinyere VideoForce, anyị akwadola ngwọta nke ga-enye gị ohere ịpụ na asọmpi - ugbu a ị nwere ike ịrụ ọrụ na ndị ahịa nke saịtị site na nkwurịta okwu vidiyo, dịka ọ na-eme n'onwe gị.
Jiri koodu mgbasa oziVF2022ruo 03/01/2022 wee nweta ụbọchị 30 n'efu iji nweta ọrụ niile nke VideoForce.
Nyochaa ọnụ ọgụgụ na ngalaba "Ọnọdụ Akaụntụ".
Ugbu a na ngalaba "Ọnọdụ Akaụntụ" ị nwere ike ịnakọta ma tụnyere data maka oge ọ bụla.Ebe ị nwekwara ike ịhụ ozi na dialog na oku na-ahaziri nzacha.
Nyochaa ọnụ ọgụgụ ahụ wee kpebie otu esi emeziwanye ihe ngosi ndị a.
Jikọọ chatbots site na ndị na-eweta ọhụrụ
Anyị na-aga n'ihu na-agbasawanye ndepụta ndị mmekọ nke ị nwere ike ịmepụta chatbot nke gị.Oge a, anyị ewepụtala njikọta na ọrụ Dahi.ai na Metabot.
A chatbot nwere ike inye aka belata ibu nkwado yana ịbawanye ahịa.Site n'enyemaka nke ọrụ Dahi.ai na Metabot, ị nwere ike hazie bot ahụ n'onwe gị, tinye nke gị ma ọ bụ jiri edemede emebere, wee jikọọ ya na Jivo.
Uru nke Metabot- Onye nrụpụta dabere na scripting na njirimara okwu (NLU with Dialogflow)
- Ebe nchekwa data arụnyere maka ịnakọta ajụjụ na nyocha
- Njirimara ndị ahịa dị elu, mkpado akpaaka na ọrụ oke
- Na-akpali akpali mmalite nke scripts na ike nke autofunnels
- Ngwa maka ijikọ na API mpụga
- Ụlọ ahịa arụnyere na bot
- Asụsụ ederede arụnyere n'ime ya
- Ntinye na igwe ojii ma ọ bụ na sava
Ọnụ: n'efu (ihe ruru ndị ọrụ 100 kwa ọnwa), site na 1000 rubles kwa ọnwa maka onye ọrụ ọhụrụ ọ bụla.
Uru Dahi- Maka Azụmahịa Obere na Ọkara
- Interface na Bekee na Turkish.A na-akwado Russian na mkparịta ụka bot.
Mwepụta mgbasa ozi ndị ọzọ
Akwụkwọ akụkọ Vedomosti - nweta ozi azụmaahịa bụ isi site na mail
Mpempe akwụkwọ Twitter
Akwụkwọ akụkọ Instagram
Mkpebi nke Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor) nke November 27, 2022 EL No. FS 77-79546
Onye nchoputa: JSC "Media Akụkọ Azụmahịa"
Na banyere.Onye nchịkọta akụkọ: Kazmina Irina Sergeevna
Mgbasa ozi na mgbakwunye ozi na akwụkwọ akụkọ Vedomosti.Ndị ọrụ Federal debanyere aha maka nlekọta nke nkwukọrịta, teknụzụ ozi na mgbasa ozi mgbasa ozi (Roskomnadzor) n'okpuru nọmba PI No. FS 77 - 77720 ụbọchị Jenụwarị 17, 2022.
A na-ekwe ka iji ihe ọ bụla mee ihe naanị n'okpuru iwu nke mbipụta na n'ihu hyperlink na vedomosti.ru
Akụkọ, nyocha, amụma na ihe ndị ọzọ ewepụtara na saịtị a anaghị abụ onyinye ma ọ bụ nkwanye ịzụrụ ma ọ bụ ree akụ ọ bụla.
Saịtị ahụ na-eji adreesị IP, kuki na data geolocation nke ndị ọrụ saịtị, usoro ojiji dị na Amụma Nzuzo.
Ikike niile echekwabara © Business News Media JSC, 1999—2022
Banklọ akụ Asia-Pacific na-akpọ oku maka nkata vidiyo "Mmetụta nke ọrịa a na ngwaahịa mba ụwa na ahịa mgbanwe mba ofesi" na Telegram na Disemba 17 na elekere 12:00
N'ime afọ abụọ gara aga, enweela mgbanwe zuru ụwa ọnụ na ahịa ngwaahịa.Ọrịa ọjọọ a na-aga n'ihu na-emetụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụnụba ụwa.Kedu ka ndị ọrụ ego si emeghachi omume maka nsogbu coronavirus?Kedu nhọrọ maka mmepe nke ihe omume?Kedu ihe echere maka ego ụwa?
Na Disemba 17, n'elekere 12:00 Moscow, ọwa Telegram nke Asia-Pacific Bank t.me/atb_su ga-anabata webinar nkata vidiyo na isiokwu "Mmetụta nke ọrịa na-efe efe na ngwaahịa mba ụwa na ahịa mgbanwe mba ofesi."
Vladimir Burdenko, onye isi nke ụlọ ọrụ itinye ego na ụlọ akụ nke Asia-Pacific Bank, ga-ekwu maka etu akụ na ụba ụwa siri mee n'oge ọrịa COVID-19, banyere mmeghachi omume nke ndị isi ego na mkpa ọ dị ime mgbanwe n'ọnọdụ ọhụrụ yana banyere ihe ga-eme. mgbanwe n'ahịa ego n'ọdịnihu dị nso ...
Mkparịta ụka vidiyo Russian, efu
Na ụdị mmadụ niile.A na-ahazi mgbasa ozi n'ịntanetị n'ụzọ ga-adị mfe ma dị ụtọ ime ya.Ị jikọọ wee banye ozugbo na interlocutor.Ọ bụrụ na-amasị gị - ị ga-amata ibe gị, ọ bụrụ na ị chọghị ya - ị pịa bọtịnụ ahụ ma nwee ihu ọhụrụ n'ihu gị.
Mkparịta ụka obi ụtọ, mmekọ nwoke na nwanyị na-enweghị njikọ, mkparịta ụka banyere ihe nkiri ọhụrụ na ụdị ejiji, na mgbe ụfọdụ ogologo mkparịta ụka etiti abalị "maka ndụ".N'ozuzu, ụdị ọnọdụ ọ bụla ị nwere taa, ị ga-ejiderịrị ebili mmiri gị ebe a.
Anyị bụ enyi :)
Ee, ọ na-eme anyị.Ma ọtụtụ mgbe.Ị na-ahụ, nkwurịta okwu na Intanet na-akwụwa aka ọtọ karịa ka ọ dị na ndụ n'ezie.N'ebe a, ị nwere ike ịbụ onwe gị ma ghara ime mgbanwe maka onye ọ bụla.Nke a pụtara na ọ na-adịrị gị mfe ịmata onye nọ gị nso na mmụọ.
Ònye nọnyeere anyị?
Ị nwere ike hazie ọchụchọ gị site na agba ntutu, nha ara na nka isi nri borscht.Ọ dị mma, dị mma.Anyị na-egwu egwu) mana ụmụ nwanyị anyị mara ezigbo mma.Chọọ onwe gị, nke a bụ nkata vidiyo.
E nwere dị iche iche.Brunettes, blondes, redheads.Ndị egwuregwu, ndị na-egwu egwu, ndị stylists.Ndị ọka iwu, ndị mmemme, ndị agha.Ndị ọchụnta ego, ndị njikwa na ndị ọrụ.Ndo, onweghị ndị isi nọ n'ịnyịnya ọcha.Ma anyị na-achọ :)
N'ezie, ụdị ihe nkiri a na-abịa mgbe ụfọdụ!Ha na-akpọ ụbọ, na-abụ abụ ma na-akụ ọkpọ.Emela ihere.Gosi ụwa nkà gị.Onye maara, ma eleghị anya, ndị na-emepụta ihe na-ekokwasa ebe a)
N'ebe a, anyị na-eme ememe ụbọchị ọmụmụ ma na-ahazi "otu isiokwu" na ọbụna mgbọrọgwụ maka otu egwuregwu bọọlụ kachasị amasị ha ọnụ.Sonyere anyị!E kwuwerị, ikpori ndụ na-atọ ụtọ karịa na nnukwu ụlọ ọrụ.
Ha chọrọ izute gị!Degara ha akwụkwọ ozi ozugbo enwere ike!
Anyị mepụtara nkata vidiyo a ka ndị mmadụ si n'akụkụ ụwa niile nwee ike zute ma kporie ndụ.Ihe kacha anyị mkpa bụ ịkwanyere ndị niile na-akparịta ụka ùgwù.Ọ na-ewepụ echiche ndị dị ka iyi egwu, okwu rụrụ arụ, mkparị na iweda ugwu mmadụ.Ekwuputara ihe a niile na iwu nke iji akụrụngwa anyị.Biko gụọ ha nke ọma tupu ịmalite mgbasa ozi mbụ gị.
Ajụjụ: Mkparịta ụka vidiyo a ọ bụ naanị maka afọ niile?
A: Ọ bụghị naanị ndị okenye na-ekwurịta okwu ebe a, mana amachibidoro ụmụaka itinye aka na mkparịta ụka ahụ.
Ajụjụ: Naanị nkwurịta okwu dị mma!
A: Biko nwee nkwanye ùgwù na nchebara echiche na nkata vidiyo anyị!Ha ga-anọnyekwara gị!
Ajụjụ: Anyị ọ bụ maka nkwurịta okwu dị mma na obi ụtọ?
A: Anaghị anabata ka ọ dị mkparị na dozie ihe ebe a.Ọzọkwa, iji okwu rụrụ arụ.Amachibidoro asụsụ rụrụ arụ ọ bụla.Na-asọpụrụ onwe gị na ndị ọzọ.
Ajụjụ: Ndị na-eme ihe ike, ndị na-eyi ọha egwu na ndị ọzọ na-anụ ọkụ n'obi na-agba ọsọ - gafere ọhịa !?
A: Anyị na ndị si obodo, agbụrụ na okpukpe dị iche iche na-ekwurịta okwu.Ma, n'ụzọ dị mwute, ha na-achọta otu asụsụ n'etiti onwe ha.Ya mere, ọ bụrụ na mmadụ kpasuru gị iwe, gbanwee gaa na onye ọzọ.
Ajụjụ: Ọ bụ nke ukwuu amachibidoro ịgbasa foto, vidiyo na ozi kọntaktị ndị ọzọ na nkata ahụ?
A: Ị nweghị ike biputere ozi nzuzo nke ndị ọzọ na ọha.A na-ewepụ mmachi a naanị ma ọ bụrụ na ị hụ ụdị mpụ.
Ajụjụ: Mkparịta ụka vidiyo abụghị ebe a na-akpọsa ozi?
A: Nye ngwongwo gị na ọrụ gị na akụrụngwa raara onwe ya nye.Site n'ụzọ, amachibidoro ịkpọsa saịtị ndị ọzọ.
Na mkparịta ụka vidiyo anyị, ị nwere ike ịkparịta ụka n'enweghị ndebanye aha, mana nke a apụtaghị na anyị agaghị enwe ike ịchọta ndị omempụ na ndị omempụ.Na saịtị ahụ, anyị na-edobe ikike ịdekọ mgbasa ozi onye ọrụ na-akpaghị aka, ya mere, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ gaghị esiri ike ịchọta ma taa onye mejọrọ ahụhụ.Ị ka nwere ajụjụ?Ị nwere aro ọ bụla iji melite ọrụ nkata vidiyo anyị?Ndị ana-akpọ maka nkwurịta okwu na nchịkwa dị n'okpuru.
Otu esi emepụta nkata vidiyo otu na WhatsApp
Mmelite kacha ọhụrụ na WhatsApp na-eweta njirimara a na-echere ogologo oge: ikike imepụta mkparịta ụka ọdịyo na vidiyo otu.Otu esi amalite ogbako vidiyo na WhatsApp ma ọ bụ kpọọ ọtụtụ mmadụ n'otu oge, anyị ga-agwa gị n'isiokwu anyị.
Otu WhatsApp Otu WhatsApp si arụ ọrụ
Ọ bụ ezie na ọrụ a adịghị maka ndị ọrụ niile - a na-eji nwayọọ nwayọọ meghee ya maka mpaghara dị iche iche.Enwere ike ịkpọ oku otu naanị ndị tinyegoro ụdị WhatsApp dị ugbu a.
N'oge oku ọdịyo na ụdị ngwa ọhụrụ a, ị nwere ike ịkpọ onye ọzọ ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ka onye na-emekọrịta ihe.Ya bụ, a ga-enwe mmadụ atọ na nkata ọdịyo ahụ.
Oku vidiyo ga-ekwe omume n'etiti kọntaktị anọ, yabụ ị nwere ike itinye mmadụ abụọ ọzọ na nkata ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọ ihe karịrị mmadụ anọ na ọgbakọ, jiri mmemme ndị ọzọ.Anyị kwuru n'ụzọ zuru ezu banyere ọrụ efu maka nkata vidiyo na edemede dị iche.
Gịnị bụ nkata vidiyo
Nkwurịta okwu na-ekere òkè dị mkpa na ndụ ọha mmadụ nke onye ọ bụla.Ma taa, ekele maka mmepe nke nkà na ụzụ, ọ ga-ekwe omume ka gị na onye na-emekọrịta ihe na-ekwurịta okwu na isiokwu ndị masịrị gị n'ịntanetị.Mkparịta ụka vidiyo, nke na-ewu ewu ngwa ngwa, ga-enyere aka mezuo nke a.
Kedu ihe ha bụ?Nke a bụ nkata vidiyo na-akwado ịkpọghachi vidiyo na ozi ọdịyo site na njikọ ịntanetị.Ya peculiarity dabeere n'eziokwu na ihe karịrị abụọ interlocutors nwere ike ikwurịta okwu na ya.Iji malite ịkparịta ụka n'ihe onyonyo, naanị ị ga-achọ ịnwe kọmpụta nwere njikọ ịntanetị, ihe ọkpụkpọ flash na-arụ ọrụ, kamera weebụ, igwe okwu na ekweisi.
Nkwurịta okwu site na nkata vidiyo fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ ọ bụla dị ala na mkparịta ụka na ndụ nkịtị, ebe ọ bụ na a na-akwado ikuku nke eziokwu site na kọntaktị anya. Chat roulette bụ ihe a na-achọkarị n'etiti ndị na-eto eto, nke na-enye gị ohere ịme ntụrụndụ na ịchọta ndị enyi ọhụrụ si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Ezubere usoro nke saịtị ahụ n'ụzọ na tupu ịmalite ịhọrọ onye na-emekọrịta ihe, ị nwere ike ịbanye n'ime ihe ndị a chọrọ, dịka ọmụmaatụ, afọ ma ọ bụ obodo obibi. Isi uru nke nkwurịta okwu na Ịntanetị bụ na ọ na-akpata ọtụtụ mmetụta uche na-adịghị ahụkebe na adrenaline ọsọ n'ime mmadụ, nke na-eme ka o kwe omume ịghọ ihe mgbochi, ọbụna maka ndị ahụ nwere ọtụtụ nsogbu na ihere na ndụ n'ezie. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nkata vidiyo dị njikere inye onye ọ bụla nkwurịta okwu dị mfe, nke nwere ike ịkwụsị n'oge ọ bụla ma ọ bụrụ na usoro mkparịta ụka ahụ kwụsịrị ịkwado gị.
Ọ bụrụ na ị kwenyere na ọnụ ọgụgụ ahụ, mgbe ahụ, ọtụtụ ndị di na nwunye nke di na nwunye bụ ụmụ amaala nke mba dị iche iche ka e hiwere ekele maka nkwurịta okwu na mkparịta ụka vidiyo.Ya mere, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta onye òtù ọlụlụ na gburugburu ebe obibi gị ruo ogologo oge, ma ọ bụ na ị nweghị mmasị zuru oke site na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe gị, gaa na nkata roulette.N'ebe a, ị ga-ahụ onye na-emekọrịta ihe nke gị na ya nwere ike inwe mkparịta ụka na-atọ ụtọ na n'ọdịnihu na-ahazi nzukọ na ndụ n'ezie.
Ọzọkwa, echefula na mkparịta ụka vidiyo ga-abụ ezigbo ngwọta maka ndị chọrọ ịmụ asụsụ mba ọzọ.A sị ka e kwuwe, ọ bụrụgodị na ị na-abanye n'ime ntọala usoro ihe omume kwa ụbọchị, ị gaghị enwe ike nweta ihe a chọrọ n'emeghị eme.Mkparịta ụka vidiyo bụ akụrụngwa na-ejikọ ọtụtụ nde mmadụ si mba dị iche iche.Ya mere, ị nwere ike ijikọta nkwurịta okwu obi ụtọ na omume asụsụ dị mkpa.
Otu Microsoft ga-enweta ezoro ezo na ngwụcha ruo ngwụcha na Julaị
Na Maachị nke afọ a, Microsoft kwere nkwa inye ụlọ ọrụ ya Microsoft Teams nkwado maka izo ya ezo na njedebe na njedebe n'ọdịnihu dị nso.Ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara n'oge na-adịbeghị anya na mwepụta nke atụmatụ ahụ ga-amalite na mbido July.Ọ ga-ewe ihe dị ka izu abụọ iji jikọta ya nke ọma.
Izo ya ezo na ngwụcha ngwụcha bụ izo ya ezo nke ozi n'isi mmalite ya na nbibi maka ebumnuche ya na-enweghị ohere nke nbipu site na ọnụ ọnụ etiti.Ndị otu Microsoft ga-eji nzuzo nzuzo ngwụcha ruo ngwụcha (E2EE) maka oku VoIP nke otu abụọ, na-enye ndị ọrụ ohere ịnyefe ozi dị nro dị ka okwuntughe.
Dị kaMSPoweruserportal si kwuo , ndị ọrụ nchịkwa nwere ike inye ọrụ a maka ma ndị ọrụ kpọmkwem yana nzukọ dum.Ndị ọrụ nwere ike mee ka izo ya ezo ngwụcha ruo ngwụcha site na iji nhọrọ nzuzo oku ngwụcha ruo ngwụcha n'okpuru Ntọala -> Nzuzo.Ndekọ oku na ndegharị agaghịzi adị.Oku E2EE ga-akwado naanị njirimara ndị dị ka ọdịyo, vidiyo, ikesa ihuenyo, nkata na atụmatụ dị elu agaghị adị.
Izo ya ezo ga-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ma onye na-akpọ oku na onye natara oku enyerela E2EE aka na ntọala ha.Izo ya ezo na ngwụcha ngwụcha ga-adị naanị na desktọpụ na ndị ahịa mkpanaka, ọ bụghị na ụdị webụsaịtị otu.
Snapchat boro ebubo ihe mberede ụgbọ ala na-egbu egbu
Mgbe afọ atọ nke mgbalị na-enweghị isi iji gbaa onye ozi Snapchat a ma ama, ndị nne na nna nke ndị nọ n'afọ iri na ụma gburu n'ihe mberede ụgbọ ala nwere ohere iji weta ọrụ a na-apụghị imetụ aka n'ikpe ziri ezi.Ọ dị ka "Ngalaba 230" a ma ama na enweghị mgbagha nke Usoro Iwu US, bụ nke na-ahapụ onye nwe ihe ịntanetị n'ọrụ maka ihe ndị ọrụ biputere na ya, agbawala.
Anyị ga-echetara, na May 2022 na Walworth County, Wisconsin, ndị ntorobịa atọ nwụrụ n'ihe mberede ụgbọ ala, na-ese onwe ha na Snapchat. Dị ka ndị nne na nna nke otu n'ime ndị ahụ metụtara, onye ọkwọ ụgbọ ala gbagoro ọsọ ọsọ ruo 123 mph iji jide oke ọsọ site na iji Snapchat ma soro ndị debanyere aha kerịta ihe a na-atụghị anya ya. Ha kwenyere na ndị nọ n'afọ iri na ụma agaghị eme ụdị ihe nzuzu dị otú ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi omume nke ọrụ ịntanetị.
Nke bụ eziokwu bụ na Snapchat na-enye gị ohere iji dị iche iche nzacha online, gụnyere, n'etiti ndị na-ewu ewu ọrụ, e nwere ike gbaa video na a "speed filter". Iji mee nke a, mmemme ahụ na-enyocha ọnọdụ ngwaọrụ ahụ site na iji ihe mmetụta GPS ma gosipụta uru ọsọ na vidiyo ahụ. Ndị nne na nna kwenyere na ọrụ vidiyo kwesịrị ịbụ onye na-ahụ maka ihe merenụ n'ihi na ọ na-ewepụta ngwá ọrụ ndị dị otú ahụ, nke pụtara na ọ na-akpali ndị ọrụ ime ihe na-achọsi ike na-anọghị.
Mgbalị mbụ iji ma ọ dịkarịa ala weta ndị nnọchiteanya Snapchat n'ụlọ ikpe enweghị ihe ịga nke ọma. Ọ tụgharịrị na ụdị ụlọ ọrụ teknụzụ ndị a dabara n'okpuru nchebe nke "Ngalaba 230" ma bụrụ ndị a gụpụrụ kpamkpam n'ọrụ maka omume nke ndị ọrụ n'ime ọrụ ahụ. Ọ baghị uru ma ọ na-ebipụta ihe na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ na-eji ọrụ ahụ maka ntụrụndụ na ọnọdụ dị ize ndụ - dị ka ọ dị na nke a. Ya mere, Ụlọikpe Mkpegharị Mkpegharị nke United States maka Sekit nke itoolu kagburu ngwa ahụ ma kagbuo ikpe ahụ n'enweghị ikpe.
Mgbe ọtụtụ afọ nke mgbalị na-abaghị uru ịgafe "Ngalaba 230" a ma ama, ndị na-agba akwụkwọ gbalịrị ịpụ n'akụkụ nke ọzọ - ọ bụrụ na a kwenyere na Snapchat na-etinye ndị ọrụ aka ime ihe ọ bụla dị ize ndụ na nke na-adịghị anabata, mgbe ahụ, ikpe ahụ nwere ike imeri n'ụlọ ikpe. . Ọrụ ahụ nwere ike ọ gaghị abụ maka ọrụ nke ndị ọrụ, mana a ga-enwe ntaramahụhụ maka mkpali ime ihe ọ bụla.
N'ezie, ọnọdụ ahụ eruola n'ókè nke absurdity - iwu dị adị kemgbe 1996, ya mere, ọ gaghị ekwe omume na-atụle ihe omume ya nnọọ ziri ezi ugbu a, na-etinye ya nwayọọ.N'otu oge ahụ, igbu oge n'ọchịchị ka dị, ụlọ ikpe enweghịkwa ike ime ihe ọ bụla ozugbo n'okwu ndị dị otú ahụ.Ọnọdụ a emeela ka ọha mmadụ nwee mmetụta dị ukwuu, na Ụlọikpe Kasị Elu nke United States Justice Clarence Thomas enweela mmasị n'okwu ahụ gbagwojuru anya - nke a pụtara na enwere ohere ọ bụla nke ijere Snapchat ozi na akwụkwọ mkpesa na ọbụna merie ikpe ahụ maka ndị merụrụ ahụ. oriri.Ọzọkwa, mmeri n'otu ikpe nwere ike imeghe atụmanya maka ikpe ikpe ndị otu ndị ọzọ gbanarịrị ibu ọrụ ma nọgide na-arụ ọrụ megidere iwu omume.
Otu Microsoft ga-enweta ezoro ezo na ngwụcha ruo ngwụcha yana ike ngosi ka mma
Microsoft na-aga n'ihu na-emeziwanye ikpo okwu Microsoft Teams ụlọ ọrụ yana ọ ga-agbakwunye ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ na ya n'oge adịghị anya.Nke mbụ, izo ya ezo na njedebe ga-apụta n'elu ikpo okwu, nke abụọ, ụlọ ọrụ ahụ ga-agbanwe ntọala na ike nke nnọkọ vidiyo.
Ụdị beta nke njirimara nzuzo njedebe na njedebe na Microsoft Team ga-apụta na ọkara mbụ nke afọ a maka ndị na-azụ ahịa nke ikpo okwu.Ọ ga-adị maka oku na-akwadoghị ya na ndị sonyere abụọ.N'ọdịnihu, a na-eme atụmatụ iwebata izo ya ezo na njedebe na njedebe maka ọgbakọ vidiyo akwadoro na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị sonyere.
Otu Microsoft anaghị akwado izo ya ezo na ngwụcha ngwụcha maka oku vidiyo. A na-ezoro ezoro ezoro ezo na mbufe na ebe nchekwa, nwere ike hapụ ya ka o kwe ndị ọrụ enyere ikike ịnweta ya site na ikpughe ya. Ụlọ ọrụ ahụ na-eji nzuzo SharePoint kpuchido data echekwara, yana OneNote ezoro ezo maka ndetu echekwara na Otu Microsoft. A na-echekwa ọdịnaya nkata niile ezoro ezo n'oge nnyefe na nchekwa. Onye isi asọmpi Microsoft Teams, Slack, enweghịkwa nzuzo nzuzo na njedebe. Na ọrụ Zoom malitere ijikọ teknụzụ na Ọktọba afọ gara aga.
Ụdị ngosi ọhụrụ atọ ga-apụtakwa na ntọala ọgbakọ vidiyo nke Otu Microsoft.Ụdị onye nta akụkọ ga-enye ohere ka ewepụta ọdịnaya dijitalụ n'akụkụ ihu ọkà okwu dị ka ihe ngosi maka onye na-ekiri ya.A na-eji usoro yiri nke ahụ mee ihe na mgbasa ozi telivishọn.
Ọnọdụ pụtara ìhè na-enye gị ohere idowe ihu gị n'elu ọdịnaya ewepụtara, nke dị n'ofe mpaghara ihuenyo niile.Ụzọ nke atọ n'akụkụ n'akụkụ na-etinye ihu ọkà okwu n'akụkụ ọdịnaya a na-egosi.Ọnọdụ kwụ ọtọ na-abịara ndị otu Microsoft ka emechara ọnwa a, yana ụdịdị abụọ ndị ọzọ na-abịa ma emechaa.
Microsoft weputara ngwa mgbakwunye PowerPoint Live maka Otu taa.Ọ ga-eme ka ngosi PowerPoint dị mfe maka ma onye na-eweta ya na ndị ọzọ sonyere ọgbakọ.
Ndị na-eme ihe ngosi nwere ike ịhụ nkata, ndetu na ihe mmịfe n'otu mpio, ndị sonyere nzukọ ndị ọzọ nwere ike lelee slide ndị ewepụtara n'onwe ha.
Onye nwe Tinder zụtara onye nrụpụta ọrụ vidiyo Korea Hyperconnect maka ijeri $ 1.7
Match Group, nke nwere Tinder, ekwupụtala ịzụrụ ụlọ ọrụ vidiyo Korea Hyperconnect.Nkwekọrịta ahụ ruru ijeri $1.7.Nke a bụ nnweta kachasị na akụkọ ihe mere eme Group Match.
Akụkọ ụtụtụ Dallas
Onye nrụpụta Korea nwere ngwa abụọ bụ isi: Azar bụ maka mkparịta ụka ọdịyo na vidiyo, na Hakuna Live bụ maka nkwanye ịntanetị.Companylọ ọrụ Korea na-erite uru, yana ego 2022 ruru $ 200 nde, Match Group kwuru.Nke a bụ 50% karịa otu afọ gara aga.Ọrụ na-ewu ewu karịsịa n'ahịa Eshia, yabụ, 75% nke ego ha nwetara sitere na ndị bi na Eshia.
A makwa hyperconnect maka atụmatụ ọhụrụ ya.Ụlọ ọrụ ahụ emepụtala ihe ọ na-akpọ "ụdị mkpanaka mbụ" nke WebRTC.Emebere ya maka njikọ ndị ọgbọ na ndị ọgbọ ozugbo na-ejighi sava.Nke a na-eme ka nchekwa onye ọrụ dịkwuo mma ma na-ebelata ego onye nrụpụta.
Nkà na ụzụ ọzọ nke ụlọ ọrụ Korea na-eme ka ọ dịrị ndị nnọchiteanya nke asụsụ dị iche iche mfe ịkparịta ụka.Ọ na-enye ohere ka ndị na-emekọrịta ihe na-ekwurịta okwu ma na-edekọ akwụkwọ site na iji ntụgharị asụsụ ozugbo.A na-eji njirimara a na ọrụ Azar.
Maka ebumnuche ndị Match Group nwetara Hyperconnect akọwapụtaghị ya.Ndị nta akụkọ Techcrunch na-eche na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike itinye teknụzụ na Tinder na ọrụ mkpakọrịta nwoke na nwanyị ndị ọzọ n'ọdịnihu.A na-atụ anya mmechi nke nkwekọrịta ahụ na nkeji nke abụọ nke 2022.
A mara Zoom ikpe maka ịgbagọ ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ nọ n'ọrụ
Ọrụ ọkpụkpọ vidiyo Zoom enweghị nde 300 ndị ọrụ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị nke ụlọ ọrụ ahụ kwuburu.Onye na-ahụ maka ọrụ ahụ kwetara eziokwu a mgbe Verge portal dọtara uche gaa na nkwupụta gọọmentị ebipụtara na mbụ nke o deziri.
Nkwupụta mbu nke Zoom kwuru... "ihe karịrị nde 300 ndị ọrụ kwa ụbọchị."na."Ihe karịrị nde mmadụ 300 gburugburu ụwa na-eji Zoom n'oge a siri ike" ...Otu ụbọchị ka e mesịrị, e deziri ozi ahụ.Ọ na-agụ ugbu a"Ndị otu mkparịta ụka mbugharị vidiyo nde 300."
Dị ka Verge na-akọwa, enwere nnukwu ọdịiche n'ihe gbasara onye ọrụ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị na onye na-akparịta ụka vidiyo.N'okwu nke abụọ, enwere ike ịgụta otu onye ahụ ọtụtụ ugboro: ọ bụrụ na ị haziela nnọkọ mkparịta ụka vidiyo ise n'ụbọchị, a ga-agụ gị dị ka ndị ọrụ ise.A na-agụ "Onye na-arụ ọrụ kwa ụbọchị" naanị otu ugboro n'ụbọchị.Ọ bụ na ihe ngosi a ka a na-agbakọkarị ewu ewu nke otu ọrụ.Ma ọ́ bụghị ya, ndị na-ege ntị n'ikpo okwu ga-adị nnọọ ukwuu karịa ka ọ dị n'ezie.
Zoom deziri ozi na-eduhie eduhie na Eprel 24, naanị otu ụbọchị ka mbipụta ahụ gasịrị, nke, n'ezie, jisiri ike gbasaa n'isi akụkọ niile nke mbipụta ịntanetị.Mgbe Verge rutere nso nso nso a, ụlọ ọrụ ahụ kwetara ndudue ahụ ozugbo.
"Anyị nwere obi ụtọ inyere ihe karịrị nde mmadụ 300 ndị bịara oku vidiyo kwa ụbọchị ka ha jikọọ ọnụ n'oge ọrịa a.Na post na blọọgụ anyị na Eprel 22nd, anyị na-akpọ ndị otu n'amaghị ama dị ka “ndị ọrụ”.Mgbe anyị ghọtara mmejọ ahụ, anyị deziri ozi ahụ na "ndị otu".Nke a bụ nlekọta siri ike n'akụkụ anyị,"Zoom zara arịrịọ The Verge.
Mbipụta ahụ dị n'ịntanetị kwuru na n'agbanyeghị na ụlọ ọrụ ahụ enyebeghị data na ọnụọgụ ndị ọrụ kwa ụbọchị, uto nke ndị na-ege Zoom na-atọ ụtọ n'ezie.Kemgbe Disemba afọ gara aga, ọnụ ọgụgụ ndị sonyere na mkparịta ụka vidiyo kwa ụbọchị abawanyela site na nde 10 ruo nde 300 taa.
Ndị isi asọmpi Microsoft Teams na Google Meet na-ada azụ, mana ha na-abawanye ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike.Ndị na-ege ntị kwa ụbọchị mkparịta ụka vidiyo Microsoft maka ọnwa ahụ sitere na nde mmadụ 70 ruo 75.N'ọnwa a, ụlọ ọrụ ahụ dekọtara ndị na-eso mkparịta ụka vidiyo 200 kwa ụbọchị.
Ọnụọgụ ndị sonyere na oku vidiyo Google zutere na-eto ihe dị ka nde 3 kwa ụbọchị iji ruo nde 100. nde mmadụ 300 ejirila ngwa nkwado Webex Cisco.Na ọnụ ọgụgụ nke ndebanye aha kwa ụbọchị na-eru nso 240,000. Ma ụlọ ọrụ ahụ ka na-enyeghị ihe na-egosi ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị na ọnụ ọgụgụ ndị sonyere na nzukọ vidiyo.
Google, Microsoft, Facebook ka nọ n'ọrụ nke ijide ma na-agbalị iji ohere efu na-adọta ndị ọrụ ọhụrụ.Dịka ọmụmaatụ, Google wepụtara ọrụ Meet n'oge na-adịbeghị anya.